> Resource > Utility > Jidka waxtarka leh si ay kaaga caawiyaan dayactir Windows Blue Screen on Boot
Haddii aad la kulantay screen buluug ah marka aad kabaha your computer, waxaad ogaanaysaa in ay sida caadiga ah waxay ka dhigan tahay jiraan wax khatar ah qaldan ee nidaamka. Shaashadda buluug ah boot waxaa keeni kara sababo badan, sida hardware aad ku rakiban abuuray khilaaf, fayras waayey ilaa diiwaanka, ama waxaa laga yaabaa file darawal ah waa musuqmaasuq. Halkan, qodobkan waxaa laga sugayaa inay socdaan ilaa xoogaa tallaabooyin ah oo aad qaadi karto si dhibta bluescreen this on boot.
Sida loo hagaajin shaashadda buluug ah boot
Boot in hab nabad ah
Habka ugu sahlan waa in ay kabaha your computer in hab nabad ah, haddii aad caadi ahaan ma kabaha karo. Press F8 marka aad bilowdo computer ah oo taga si ay Panel Control , gujinaya System , ka dibna Manager Device . Dhex mara category qalab kasta oo laga baarayo oo dhan qalabka ay u icon lahjadda telltale jaalaha ah in muujinaysaa waxaa jira khilaaf qalab. Haddii ay tani caawin waydo, ordo baaritaan oo dhan, waayo nidaamka.
Boot la Downlaods CD / USB drive
Haddii nidaamka scan oo dhan sidoo kale waa dhammaadka dhintay, waxaad hagaajin kartaa this screen buluug ah boot la qalab ah oo khibrad leh, sida Wondershare LiveBoot Boot CD / USB , taasoo ku siinaysaa habka jawi Gaarna nadiif ah oo kuu ogolaanaya in aad dhibta shaashadda buluug in daqiiqo, ma aha sida tii si adag sida aad u malaynayso.
Inuu gato barnaamijka, iyo aad code diiwaanka oo la xidhiidha download heli doonaa. Markaasuu soo bixi oo ku xidh on a computer wanaagsan-shaqada. Markaas raac tallaabooyinka hoose si ay u abuuraan kuu gaar ah Downlaods CD ama USB drive iyo hagaajin aad screen buluug ah boot in 3 tallaabo.
Step1: 1 click si loo abuuro Downlaods CD / USB drive
First of dhan, diyaarin maran CD ama USB drive ah, waxaa furaysto galay computer iyo ordi Wondershare LiveBoot 2012 ah. In interface saaxir ah soo socda, dooran CD Downlaods / USB Hanuuniye habboon abuurista iyo riix batoonka gubashadii cagaaran. Waxaad ka heli kartaa drive ah CD / USB Downlaods in dhowr ilbiriqsi.
Step2: Boot your computer la CD Downlaods / USB
Hadda waxaad tahay tallaabo labaad. Noqda kombiyuutarka oo aad soo bandhigaysaa daah buluug ah boot. Geli drive ee CD / USB Downlaods galay computer ka iyo waxa la bilaabi. Marka calanka Windows jirsado, F12 jaraa'id oo isla markiiba si ay u tagaan Menu Device Boot ah. Markaas dooro "suuro ama USB CD-ROM Drive". Muddo ka dib, waxaad heli doontaa doorasho ah soo socda. Guji "Boot ka LiveBoot" si aad u hesho your computer.
Tallaabo 3: U dayactir shaashadda buluug ah boot
The Downlaods CD / USB drive keenaysaa in aad hesho nidaam ka hor-ku rakiban, kaas oo aad hoos ka shaqayn kartaa si caadi ah. Waa hagaag, waxa ugu horeeya ee ay tahay in hagaajin shaashadda buluug ah boot. Tani waa waxa aan u baahan tahay inaad hadda samayso. Orod Wondershare LiveBoot 2012 ah, oo u guuraan ah "Windows Recovery", doortaan "Loading Shil Xalka". Halkan waa xal dhameystiran u baadi screen buluug aad. Raac habka hoos ku soo bandhigay iyo qaadato tallaabada si uu u xaliyo shaashadda buluug ah boot hadda.